मार्केटिङ सामग्री - Print Peppermint
फ्लायरहरू, स्टिकरहरू, खामहरू, ब्यानरहरू, र थप जस्ता सबै प्रकारका प्रिन्ट उत्पादनहरूमा तपाईंको ब्रान्डको लागि एकता सिर्जना गर्नुहोस्।
घर / मार्केटिङ सामाग्री
मार्केटिङ सामग्रीसँग सम्बन्धित रोचक लेखहरू
FAQs - मार्केटिङ सामग्री
म कसरी एक व्यवसाय उडान बनाउने?
फोटोशप सबैको लागि होइन। यद्यपि यो डिजाइनको लागि धेरै शक्तिशाली उपकरण हो, सबैसँग यो कसरी काम गर्दछ जान्नको लागि समय हुँदैन। चिन्ता लिनु पर्दैन। तपाईंले फोटोशप जस्ता गहन डिजाइन कार्यक्रमहरू प्रतिस्थापन गर्न Canva जस्ता अनलाइन उपकरणहरू फेला पार्न सक्नुहुन्छ। शुरुआती र पेशेवरहरूले समान रूपमा यी उपकरणहरूबाट लाभ उठाउन सक्छन्। यसले तपाईंलाई सिर्जना गर्न मद्दत गर्न सक्छ ... थप पढ्नुहोस्
एक trifold ब्रोशर डिजाइन गर्न कति समय लाग्छ?
ट्राइफोल्ड ब्रोसर डिजाइन गर्न कति समय लाग्छ? ट्राइफोल्ड ब्रोसर भनेको38/1 x2को कागजको पाना फोल्ड गरेर 11-प्यानल भएको फ्लायर हो। साना घरेलु व्यवसायहरूले सामान्यतया यसलाई मार्केटिङ दूतको रूपमा प्रयोग गर्छन् किनभने यसलाई सजिलै पठाउन सकिन्छ। धेरै डिजाइनरहरूले गलत धारणा राख्छन् कि ... थप पढ्नुहोस्
स्टेशनरी डिजाइन के हो?
स्टेशनरी डिजाइन के हो? सुझावहरू, रणनीतिहरू, र डमीहरूका लागि प्रेरणाहरू डिजिटल मार्केटिङ उपकरणहरूको तीव्र वृद्धिको बावजुद, स्टेशनरीले आफ्नो भिक्टोरियन कद गुमाएको छैन। बेलायती राजतन्त्र जस्तै, यो अझै पनि पर्याप्त शक्ति खोल्ने क्षमता छ। स्टेशनरी एक व्यापक शब्द हो जसले व्यापार कार्डहरू, खामहरू, लेटरहेडहरू, लेबलहरू, पोस्टकार्डहरू, उडानहरू, ब्रोशरहरू, र अन्य समानहरू समावेश गर्दछ। थप पढ्नुहोस्